... 7:57:00 AM
စိတ်ကူးလေးက ဆန်းတာတော့ အမှန်ပါ။
ထူးခြားတဲ့ဝေမို့ဒါ မိန်းကလေးအတွေး လား ဆိုကာ ဖတ်ရင်းနဲ ယုံကြည်ဖို့ ခက်အံ့သြနေမိတာ။
ဒီလို ပြောလို့စိတ်မရှိစေချင်ပါဘူး။ကျွန်မလည်း “ကြယ်လွဲမိုး”ရေးပြီးတော့ ယောက်ျားလေး သုံးယောက်ကို စာမူဖတ်ခိုင်းပြီး အတည်ပြုချက်ယူခဲ့ရပါတယ်။
ဒါနဲ “့သက်ပြင်းမောတွေ အခါခါ ချနေရတာ မြတ်နိုးမေ ဘာသာ အသိ ၊” မြတ်နိုးမေ?
5 April 2009 at 7:51 AM
ကျေးဇူး မယ်ကိုးရေ ၊၊ အမှန်က မြတ်နိုးမေပါ ၊၊ ဝေ ဆိုတဲ. နာမည်ကို သုံးလိုက်တာ ၊၊ အဲဒီနေရာက လစ်ပြီး ကျန်ခဲ.တယ် ဗျာ ၊၊ သေချာဖတ်ပေးတာကျေးဇူးပါ ၊၊
5 April 2009 at 9:13 AM
The whole story is very intersting.Want to know what will happen... But she control herself. I really appreciate this. I am not sure I can do like what she did.
အဲဒီလိုလေး ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ ၊၊
5 April 2009 at 1:01 PM
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ အားပေးနေပါမယ်။
5 April 2009 at 3:48 PM
6 April 2009 at 1:45 PM